Bogga ugu horeeya ee goobta intarnat-ka / Dheeraad ku saabsan Iswiidhan / Deegaanka / Gobol iyo degmooyin / Norrbottens län / Arjeplog
Dib u cusboonaysiinti ugu dambeysay: 7 10 2020
Degmada Arjeplogs waxeey ku taala oo uu dhawdahay webiga Iswiidhan ugu qoto dheer ee Hornavan oo ku yaalo Lappland. Waxaan aan lee nahay oo dheeraad nagu ah, waxyaabaha dabiiciga ah iyo fursadooyin lagu helo hawlaha firfircoonida ee guriga dibaddiisa oo hadana fara badan. Waxaan lee nahay 8 727 webbi iyo biyo mareen, taasi waxeey ka dhigeeysaa Arjeplog degmada Iswiidhan ugu biyo-badan, mecnaheedana waa in aan lee nahay 2,5 webi iyo ku dhawaad 3 km oo xeeb ah halkii qofba ee degaanka dagan.
14,494 kiilomitir oo laba jibaaran
Skellefteå 218 kiilomitir
Luleå 240 kiilomitir
Umeå 316 kiilomitir
Xiliga jiilaalka degmada waxeey lee dahay calaamad caalami ah oo xoog leh, ayadoo ee hawlaha tijaabinta baabuurada ee aad uu badantahay si degdeg ahna kor ugu kaceeyso. Gobolka waxuu si calaami ah ugu hogaan uu yahay dhinaca ku tijaabinta qaboowga baaburada iyo qeeybaha she'yga ka kooban yahay, halkaasi ee Arjeplog xarun uu tahay weshada-tijaabinta. Xafadaha ka kooban dhismaha-isku dhaw, waxaa uu dhow shaqo, adeeg dadweyne iyo dukaamo, Stockholm waxeey uu jirta masaafad sadax saac ah oo diyaaradeed. Halkaan waxaa ka jira Tayo nololeed iyo kalsooni-mustaqbaleed.
Shirkada samafalka Arjeploghus waxeey ku lee dahay xaafadaha-isku dhaw guriyaal kiro oo badan oona lega heleeyo. Halkaan waxaa ku yaalo guriyaal bartamaha ku yaalo oona uu dhaw iskuul iyo dukaamo leh aragti-webi iyo dhawaan uu leh dabiiciga.
Markii ku saabsan tahay qaxootiga ku jiro qorshaha taabo gelinta, xariiriyaha-qaxootiga ayaa uu qabanaayo hal guri oo ka socdo Hey'adda samafalka Arjeploghus. Qabilaada waxuu qofka qaxootiga ah ku helaa qalabka asaasiga ah ee gurigiisa oo qofkaas uu heeysan karo, qabilaada qaxootigana cunto-adeega koobaad ee uusoo gadeeysaa oo ee ku jiraan cuntooyin qarkood oo uu dhigmo 500 karoon halkiiba qof ee weeyn. Xariiriyaha-qaxootiga iyo degaan-tageeraha waxeey qofka qaxootiga ah soo tusaayaan Arjeplog iyo agagaarkeeda. Xariiriyaha-qaxootiga waxuu balan ka sameeynaa Xafiiska-shaqada, iskuulka, rugta caafimaadka iyo haddii loo baahan yahay daryeelka dadweeynaha ee ilkaha. Sido kale qofka qaxootiga ah waxuu caawinaad ka helaayaa degaan-taageere inta bilaawga ah oo ka caawin karo la xariirka degmooyinka iyo hey'addaha ee ka baxsan degmada.
Hel shirkadaha guryaha iyo guryaha.
Luuqadaha weeyn waxaa ka mid ah: af dari, af beershi, af somaali, tigrinya, amxaari, ingriis, ruush iyo af jarmal.
Kanisadooyin tirakooban ayaa ku yaalo Arjeplog, waxaa ka mid ah Kaniisada Iswiidham, Kaniisada Pingst, EFS ururka fidinta iyo Shuhuud Yaho.
Dukaamo, maktabad, xafiiska-shaqada, farmashi, xarunta isboortiga iyo dabaasha, xafiiska adeega bulshada, xarunta dib uu isticmaalida gacan-labaadka, Hey'aada laanta cas, banaan ku gadid, maqaayadooyin iyo kaafeteeriyo.
Arjeplog waxuu ku yaalo xanaanad degmada lee dahay iyo mid gaar ah. Caruurta qaxootiga ma sugan oo waqti looma qabto bilaabashada xanaanada ama dugsiga xiliga firaaqada.
Halkaan waxaa ku yaalo dugsi hoose-dhexe iyo sare. Dugsiga sare waxaa soo dalbado arday ka socoto Iswiidhan oo dhan maadama kaligiis ku yahay lahaanshada barnaamijka farsamada ee leh nidaamka farsamada baaburrada. Intaas waxaa usii dheer ardayda waxeey dooran karaan Barnaamijka sayniska, bulshada iyo dhaqaalaha sido kale barnaamijka dhiska iyo dhismooyinka.
Barashada jiheeynta bulshada oo loogu tala galay soo galooytiga cusub waxaa la qabto ayadoo la adeegsanaayo fideeyo shireed, waxaana lagu qabtaa iskuulka Hornvan. Waxbarashada jiheeynta bulshada oo dhan waa 100 saacadood. Ma lahan waqti-sugid barista af-iswidhishka loogu talo galey dadka ajnabiga ah. Degmada waxeey uu qabqaabisa dadka ku jiro qrosho taabo gelinta, barista af-iswiidhiska inta lagu jiro xilliga xagaaga.
Barista af-iswidhishka loogu talo galey dadka ajnabiga ah waxaa laga helaa Iskuulka Hornavan, dugsiga sare waxaa masu'uul ka yahay Barista af-iswidhishka loogu talo galey dadka ajnabiga ah ee day'yarta iyo midka dadka waa weeyn. Waxaa jiro fasalo diyaaris ah oo ku yaalo iskuulka Kyrkholm oo loogu tala galay da'yarta ku jiro da'da dugsi dhexe.
Dugsiga sare ee dadka weeyn iyo midka gaarka ah wuu ku yaala Arjeplog iyo sido kale waxaa jirto fursad lagu dhigta waxbarashad-masafadeed ee heer jaamacadeed.
Waxbarashada dadka waaweyn Iswiidhiska soo galooytiga Barashada bulshada
Waxaa jirto rugta caafimaadka oo leh qeeybahaan xirfadeed: daryeelka caafimaadka caruurta, daweeyn-guud, qaabilaada-umulisada, hoowsha kalkaalisada caafimaadka ee degmada, hoowsha degdega ee daryeelka lugta, heeganka caafimaadka ee asaasiga ah.
Waxaa jirto caawinaad turjumaad dhamaan markii xariir lala yeelanaayo hey'addaha dowlada. Turjumaanka qadka telefoonka ayuu ku jira.
Gaadiidka dgobolka Norrbotten waxuu lee yahay safar baseed oo ka socdo uuna socdo Arjeplog maalin kasto. Baska ayaa uu qaadan kartaa xarunta tareeynka ku taalo Jörn (160 km uu jirto Arjeplog). Eeraboorka waxuu ku yaala (85 km uu jiro Arjeplog), bas-isku xariiriyo wuu jiraa. Silverexpressen Skelleftebuss oo tago Bodö ee dalka Noorweey (maalinkasto).
Degmada oo leh ku dhawaad 300 oo shaqaale, waxee ka tirsan tahay shaqo dhiibaha ugu weeyn Arjeplog. Maamuulka, gaar ahaan iskuulada iyo daryeelka waayeelka, waxaa badana loo baahan yahay shaqaale ku meel gaar ah ee waqti gaaban ama dheer. Shaqo dhiibo kale waa hey'adda gaadiidka.
Xilliga jiilaalka waxee keeneeysaa hoowsha tijaabinta baabuurka ee Arjeplog, shaqaale badan oo xilli shaqaleeysan oo uu ka adeeg siiyo martida ajnabiga iyo shaqaalaha-martida waxeey uu baahan yihiin. Waxeey gaar ahaan ku saabsan laga bilaabaa darawalka cagcagafka iyo daawaha cagafka oo wadada barafka ka dhigaayo mid furan, ilaa shaqaale hoteel iyo maqaayad iyo jiheeye. Aqoon-luuqadeed waa dheef, sababto qofka ka shaqeeynaayo tijaabinta baaburka ama howl dhacdo waxuu la kulmaa dad badan oo ka yimid dalal kala duwan.
Degmada Arjeplog waxeey sido kale lee dahay shirkadooyin badan oo yar oo ka howl galo laamo badan oona leh hal ama labadoo shaqaale. Laga yaaba in shirkadahaan mid ka mid ah in ee xirfadaada uu baahan yihiin? Si doonis ah uu la xariis Xafiiska shaqada Arbetsförmedlingen i Arjeplog.
Si doonis ah uu la xariis Xafiiska shaqada Arbetsförmedlingen i Arjeplog.
Shaqooyinka ka banaan gudaha Arjeplog